सर्वश्रेष्ठ १० × १० पूर्ण र Color्ग मुद्रित विज्ञापन तम्बू निर्माण र कारखाना जेसन झण्डा कला र शिल्प
१० × १० पूर्ण र Color्ग मुद्रित विज्ञापन तम्बू
१० × १० विज्ञापन तम्बू वा पप अप डेन्ट प्रायः सबै प्रकारका घटनाहरू र गतिविधिहरूको लागि सबैभन्दा लोकप्रिय प्रदर्शन समाधान हो।
डेरा माथि छापिएको छ र 600D पोलिस्टर सिलाइएको छ। हाम्रो रye्ग उच्च बनावट मुद्रित तम्बू शीर्ष तपाईं स्पष्ट र कुरकुरा रंग सुनिश्चित गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं ट्रेड शो बुथ बीच अद्वितीय हुन चाहनुहुन्छ भने, तपाईंलाई निश्चित रूपमा अनुकूलन विज्ञापन तम्बु चाहिन्छ।
हामीलाई ईमेल गर्नुहोस् अहिले खरिद गर
प्रोफेशनल डिस्प्ले सलुशन ， क्वालिटी क्यानपी टेंट
CFM अनुकूलन विकल्पको साथ सबै भन्दा राम्रो पेशेवर र प्रीमियम गुणस्तर क्यानोपी टेंटहरू प्रस्तुत गर्न समर्पित छ। हामी ग्राहकहरूलाई तिनीहरूको भित्री र बाहिरी घटनाहरूको लागि सब भन्दा उपयुक्त प्रदर्शन पाल प्राप्त गर्न सुनिश्चित गर्न कोसिस गर्दछौं।
१०x१० क्यानपी तम्बू छनौट गर्नुहोस्, जुन हाम्रो सबैभन्दा लोकप्रिय उत्पादनहरू मध्ये एक हो, कम्पनीहरूले एक प्रमोशनल उपकरण प्रयोग गर्दछ जुन प्रयोगको सजिलो र ठूलो नतीजाहरूको लागि डिजाइन गरिएको हो। यो प्राय: उत्पादन प्रबर्धनको लागि प्रयोग हुन्छ जस्तै ट्रेड शो वा प्रदर्शनीमा। यो एकदम बहुमुखी छ, र लगभग कुनै पनि परिस्थितिमा राम्रोसँग काम गर्दछ।
टिकाऊ, लामो दिगो र आकर्षक विज्ञापन पालहरू
हाम्रो कस्टम प्रोमो चंदवा एक शक्तिशाली मार्केटिंग उपकरण हो। जब तपाईं हाम्रो अनुकूलन पालहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ, तपाईं तिनीहरूलाई सेटअप गर्ने क्षमता राख्नुहुन्छ र तपाईं जहाँ चाहनुहुन्छ तिनीहरूलाई राख्नुहोस्। हामीले प्रयोग गर्ने विशेष कपडाहरू अत्यधिक ज्वाला retardant, UV सुरक्षा प्रस्ताव, र वाटरप्रूफ छन्। यसले भाडावालहरूको पूर्ण इनडोर र आउटडोर प्रयोगको लागि अनुमति दिन्छ।
600D पु पॉलिएस्टर
पूर्ण र Color्ग डाई-सब्मिमेटेड, स्पष्ट र जीवंत रंग
१० * १० पप अप क्यानपाइ टेंटको सब भन्दा राम्रो सुविधाहरू मध्ये यो एक उत्कृष्ट विज्ञापन सुविधाहरू हो। जब प्रमोशनल टेन्टहरू आउँदछन्, तिनीहरू बाहिर आउँदछन्। हामीले प्रस्तुत गर्ने विज्ञापन तम्बुले लोगो वा नारा प्रिन्टिंगको लागि अनुमति दिन्छ। यी तम्बूहरू प्राय जसो प्रयोग हुने र sub उच्च बनानेका लागि राम्रोसँग काम गर्दछ, जसले कुरकुरा र स्पष्ट मुद्रित छविहरू सुनिश्चित गर्दछ।
तपाईंको आवश्यकताहरू पूरा गर्न विभिन्न विकल्पहरू
यो १०x10 फिट घटना मार्केटिंग तम्बुको लागि, हामी तीन प्रकारका तम्बू फ्रेमहरू, वर्ग एल्युमिनियम mm१ मिमी ट्यूब, हेक्स एल्युमिनियम mm० मिमी ट्यूब र हेक्स एल्युमिनियम mm० मिमी ट्यूब प्रदान गर्दछौं। Mm१ मि.मी. वर्ग तम्बू फ्रेम र 40०mm हेक्स टेंट फ्रेम अधिक बजेट बचत हो, र mm०mm हेक्स टेन्ट फ्रेम अधिक भारी शुल्क र लामो प्रयोगको लागि हो।
भारी शुल्क फ्रेम बाहेक, हामी केहि शृ weather्खलाको मौसममा तपाइँको प्रदर्शन बुथको स्थिरता बढाउन मद्दत गर्न स्यान्डब्याग, डोरी र ग्राउन्ड स्पाइक जस्ता श्रृंखला सामानहरू पनि प्रदान गर्दछौं।
डेरा झण्डा माउन्ट होल्डर
डोरी र ग्राउंड स्पाइक
अतुलनीय खेल प्रिन्टि Service सेवा
CFM कस्टम मुद्रित क्यानपाई तम्बू साथै अनुकूलित आकारको प्रदान गर्दछ। हामीले 10x10ft, 10x15ft र 10x20ft को लगभग सबै प्रकारका प्रदर्शन तम्बू फ्रेमहरू स .्कलन गरेका छौं। हामीलाई तपाईंको फ्रेमको आकार दिनुहोस् र हामी यो मिलाउन टेन्ट शीर्षलाई अनुकूलित गर्न मद्दत गर्न सक्छौं।
Q: के हेम्सको रंग भेट हुने पालको अनुरूप हुन सक्छ?
A: हो, हामी पालको भू-रंगमा आधारित समान रंगको हेम्स छान्नेछौं।
Q ： के तपाईं क्यानपी वा पूरै भित्ता एकै टुक्रामा बनाउन सक्नुहुन्छ?
A: कपडाको सीमित आकारले प्रभावित, हामी एकीकृत र उत्तम लोगो सुनिश्चित गर्न पेशेवर र सिमलेस बिना दुई टुक्रा सिलाई बनाउँछौं।
प्रश्न: आउटडोर प्रयोगमा पालको स्थिरता कसरी बनाउने?
A: स्थिरता बढाउन तीन तरिकाहरू तपाइँको विकल्पको लागि उपलब्ध छन्।
l स्यान्डब्यागको साथ हावा बकसुआ
l वेबिंगको साथ समायोज्य बकसुआ
l स्यान्डब्यागको साथ Velcros
प्रश्न: बाहिरी प्रयोगमा पानी चुहावट कसरी जोगाउने?
A: हामी चुहावटबाट बच्न सबै सीम लाइनहरूमा तातो एयर टेपहरू प्रयोग गर्ने छौं।
प्रश्न: पाल कसरी सफा गर्ने?
A: कपडामा कोटिंगलाई ध्यानमा राख्दै, तपाईं क्लीन्जर प्रयोग गर्नुहुन्न। कोमल साबुनले फोहोर ठाउँहरूमा पुछ्नु राम्रो विकल्प हो।
Q: तपाइँ मेरो हार्डवेयरसँग मिलाउन प्रिन्टि custom अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्छ?
A: हो, जहाँ भए पनि तपाइँले तपाइँको प्रदर्शन हार्डवेयर कहाँ पाउनुहुन्छ र के तपाइँको प्रदर्शन हार्डवेयरको प्रकारले फरक पार्दैन, हामी यससँग मिलाउन सटीक ग्राफिक्स प्रिन्ट गर्न सक्छौं।
प्रश्न: तपाइँ टेन्ट ग्राफिक र हार्डवेयर कसरी प्याक गर्नुहुन्छ?
A: सामान्यतया, हामी पालमा ग्राफिक, हार्डवेयर, र ह्विल प्याकेज प्याक गर्ने छौं यातायातमा पाels्ग्राहरूलाई नोक्सानबाट जोगिन।
10x15 क्यानोपी तम्बू
ट्रेड शो टेंट
१० × १ E EZ माथि तत्काल चत्रो पाल
१० × २० कस्टम पप अप टेन्ट
वक्र तनाव कपडा प्रदर्शन
वक्र फैब्रिक पपअप प्रदर्शन
कपडा ब्यानर स्ट्यान्ड-मानक
फिटेड टेबल स्लिटको साथ फिर्ता कभर गर्दछ
फिट टेबल जिपरको साथ फिर्ता कभर गर्दछ
खुला फिर्ता संग फिट टेबल कभर
मानक थ्रो शैली तालिका कवर गर्दछ
सिधा कपडा पपअप प्रदर्शन
सीधा तनाव कपडा प्रदर्शन
फिट तालिका कभरहरू तन्नुहोस्